अर्थशास्त्री र पर्यटन विज्ञहरुले पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । प्रदेश सरकार बजेट निर्माणमा व्यस्त भएका बेला अर्थशास्त्रीहरूले अब निश्चित योजना र दृष्टिकोणसहित बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । आगामी असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने संविधानिक व्यवस्था छ ।
अर्थशास्त्री डा. भेषप्रसाद धमलाले सबैभन्दा पहिला कृषिमा लगानी थपिनुपर्ने बताए । “अब परम्परागतशैलीबाट कृषि अगाडि बढ्न सक्दैन,” धमलाले भने, “आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरी कृषिसम्बन्धी नीति बन्नुपर्छ ।” उनकै शब्दमा अब हलोका भरमा कृषिको उत्पादकत्व बढाउन सकिँदैन । व्यापार घाटा कम गर्ने एकमात्र क्षेत्र कृषि भएको उनको दाबी छ । कसरी धेरै रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक समृद्धि गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
पर्यटन विज्ञ प्रा.डा. सोमनाथ खतिवडाले पर्यटन र कृषिकै माध्यमबाट छिटो जनताको जीवनस्तर उकासिने बताए । “प्रदेश–१ कै कुरा गर्ने हो भने पनि पर्यटकलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित ८ हजार मिटरमाथिका ५ हिमाल यही छन्,” उनले भने, “पर्यटकीय महत्वका सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र र कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष पनि यहीँ छन् ।”
अर्थशास्त्री धमलाले कृषिमा आत्मनिर्भर भएमा आधाभन्दा बढी व्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताए । “माटो परीक्षण गरेर बाली लगाएमा उत्पादन पनि वृद्धि हुन्छ,” उनले भने, “पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी खाद्यन्न र त्यसपछि इन्धन आयात हुन्छ ।” उनले बाँझो जमिन राख्न नपाउने नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए ।
अर्थशास्त्री डा. अर्जुन बरालले आवास, कृषि र औद्योगिक क्षेत्र छुट्याउन सुझाव दिए । “खेतीयोग्य जमिनलाई काँक्रा चिरेजसरी चिरैचिरा पारिएको छ,” डा. बरालले भने, “कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण नभएसम्म उत्पादन वृद्धि हुँदैन ।” उनले सयौं बिघा जमिनलाई एकीकृत गरेर आधुनिक प्रविधिबाट खेती गर्ने प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिए ।
उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योग पनि सेयर बजारमा आकर्षित
बाँके र बर्दियामा रासायनिक मल अभाव
उखुको विकल्प खोज्दै किसान
स्याउ उत्पादन दोब्बर